Duqa Degmada Garowe oo Kormeeray Suuqyada Caasimadda – Radio Daljir
Diseembar 9, 2015 6:01 b 0
Somalia, December 09, 2015-(Daljir)_ Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Garowe Xasan Maxamed Ciise Goodir ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay suuqa weyn ee lagu iibiyo hilibka iyo khudaarta, kaasi oo dhawaan dayactir lagu samayn doono.
Xasan Goodir ayaa u kuurgalay baahiyaha dadweynahu qabaan, waxayna u soo gudbiyeen codsiyo dhawr ah arrimood oo ay ku jiraan in laga badalo soollar ku xiran saqafka kore ee suuqa, marawaxado iyo loogu xiro safiitooyin.
Waxa uu mid mid u waraystay haweenka suuqweynaha ku ganacsada, waxayna u sheegeen inay haysato dhibaato xooggan isla markaana u baahanyihiin in xaaladooda wax laga qabto.
Gudoomiyaha degmada oo kormeerka ka dib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dhawaan dacaytir ballaaran ku samayn doonaa suuqa iyo dhammaan goobta uu ku yaallo oo lagu magacaabo Injida, wuxuuna xusay in arrintaasi gacan ka gaysanayso hay’adda NRC.
“Runtii, waxaan dayactir ku samayn doonaa suuqa iyo dhammaan Injida, waxaana qorshaynayaa inaan ka dhigno mid ka wanaagsan sida hadda ay tahay, waxaana sidoo qorshaynaynaa inaan Town Plan y samayno Injida oo runtii hawlbowle u ah ganacsiga iyo adeegga bulshada”Ayuu yiri guddoomiyuhu.
Duqa degmada ayaa carrabka ku dhuftay inay bulshada ugu adeegayaan
canshuurta ay labaxaan, taasina tahay waajibka saaran.Waxa uu u mahadceliyay dhammaan Xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garowe, NRC iyo bahda saxaafadda oo uu sheegay inay kaalin muuqata ka gaysanayaan hormarka caasumadda Garoowe.